Global Voices teny Malagasy » Arabia Saodita: Khaled Al Johani, Mpanao Hetsi-Panoherana Mandeha Irery, Navotsotra Vonjimaika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Jolay 2012 3:41 GMT 1	 · Mpanoratra Anas Soliman Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Arabia Saodita, Fahalalahàna miteny, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Fony nisy ny antso hanaovana Androm-Pahatezerana iray tao Arabia Saodita tany amin'ny 11 Martsa 2011 tany, dia azo nisaina tamin'ny rantsan-tànana ireo mpanao hetsi-panoherana sahy niatrika ny polisy marobe. i Khaled Al Johani no hany iray tamin'ireo voarakitra tanaty horonana .
Niresaka taminà andianà mpanao gazety nentin'ny fiaraben'ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny Fampahalalam-baovao ho any amin'ny toerana nomanina hisian'ny hetsika i Al Johani ary nosamborina iny andro nanaovana ny resadresaka iny ihany rehefa niverina nody tany an-tranony. Notazonina izy hatramin'ny androany, mandra-piantson'ny rahalahin'i Khaled tamin'ny 2.50 tolakandro [ar]:
Isaorana Andriamanitra! Nafahana mandritra ny 48 ora ny rahalahiko, Khaled Al Johani. Milamina n y zavatra rehetra ary misy maro hafa navotsotra niaraka taminy.
Turki Alabdullhai, Saodiana mpanao gazety, dia nibitsika hoe:
Khaled, mariky ny fanantenan'ity firenena ity ny tsikinao. Khaled, ianao no vatolahy nampibaribary ny tsy rariny. Khaled, ny zavatra iriko dia ny hamakianao izay efa voasoratra sy mbola hosoratana mikasika anao.
Khaled Al Johani avy hatrany taorian'ny namotsorana azy androany. Sary nozarain'ny rahalahiny @I98A tao amin'ny Twitter.
Waleed Al Majid, Saodiana mpitsabo dia nibitsika hoe :
Misaotra betsaka, Khaled Al Johani, tamin'ny fanaporofoana indray mandeha tsy miverina fa misambotsambotra fahatany izay heveriny ho mpampihorohoro ireo manampahefana. Ao anatina tontolo iray misy fahamarinana, ireo mpanao kolikoly sy mpihatsaravelatsihy no tokony ho eo amin'ny toeranao.
@iNoor93 naneho ny hafaliany tamin'ny fibitsihana hoe :
Andron'ny tsikin'i Khaled al-Johani = vita!
Ary i Mortada Al Atiya, Saodiana mpanoratra, dia nibitsika hoe:
Khaled Al Johani: Mitsiky ve ianao satria faly fa navotsotra? Sa satria ireharehànao ny fahasahianao? Sa hanafenanao ny hirifirinao? Na ho fihantsiana ireo nisambotra anao? Sa mba hampiasa loha ireo izay namela anao ho irery?
Ireo Saodiana mpampiasa aterineto dia nitahiry hatrany tsy ho levona ny fahatsiavoany an'i Al Johani  ao amin'ny Twitter.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/07/26/36118/
 hany iray tamin'ireo voarakitra tanaty horonana: https://www.youtube.com/watch?v=mxinAxWxXo8
 nitahiry hatrany tsy ho levona ny fahatsiavoany an'i Al Johani: https://globalvoicesonline.org/2012/06/27/saudi-arabia-tweeps-to-remember-detained-protester/